Izindaba - I-PCBN (i-cubic boron nitride)
I-PCD (idayimane le-polycrystalline)
I-Polycrystalline cubic boron nitride - Isifinyezo sesiNgisi i-PCBN (i-cubic boron nitride) Amathuluzi we-CBN ngokuvamile acubungula izingxenye ze-Cast Iron nezensimbi !!! Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye.
Izici zokusebenza kwethuluzi le-PCBN:
1: ubulukhuni High futhi bafake ukumelana;
2: Ukuzinza okuphezulu okushisayo nokuqina okuphezulu kokushisa;
3: Ukuzinza okuphezulu kwamakhemikhali;
4: It has conductivity ezinhle ezishisayo
5: Coefficient ephansi yokushayisana;
Ithuluzi le-PCBN lilungele ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu nobuchwepheshe be-ultra-high cutting
Ithuluzi le-PCBN likulungele kakhulu ukusika ngesivinini sensimbi, insimbi eqinile nezinye izinto.
Qeda ukukhishwa kwehadiwe elicishiwe (ubulukhuni ngaphezu kwe-HRC55); Akunconyiwe ukucubungula i-nodular cast iron !!!
Idayimane lePolycrystalline - Isifinyezo sesiNgisi i-PCD, Synthetic Polycrystalline Diamond isetshenziswa kakhulu) Izici zamathuluzi we-PCD: ubulukhuni obuphakeme, amandla aphezulu wokucindezela, ukuqhutshwa okuhle kokushisa nokuqina kokugqoka, okungathola ukunemba okuphezulu kwemishini nokusebenza kahle ekusikeni kwejubane.
Amathuluzi we-PCD ngokuvamile acubungula i-aluminium alloy.
1: I-PCD grade 010 izokhethelwa i-silicon aluminium alloy (okuqukethwe kwe-silicon ngaphansi kuka-11%)
2: I-PCD grade 025 ikhethelwe i-silicon aluminium alloy ephezulu (okuqukethwe kwe-silicon okungaphezulu kuka-12%)
I-3: I-aluminium emsulwa (izici: ithambile, ikakhulukazi inamathele, izidingo eziphezulu kakhulu zamathuluzi nezinto zokukhiqiza)
I-Aluminium silicon alloy ingxubevange yokwakha nokuphonsa ikakhulu eyenziwe nge-aluminium ne-silicon, enokuqukethwe okujwayelekile kwe-silicon okungu-11% .I-AI ingxubevange isetshenziswa kabanzi ukwenza ezinye izingxenye ngaphansi kwezimo zokushibilika kokushayisana embonini yezimoto nasembonini yokukhiqiza imishini ngenxa yokukhanya kwayo isisindo, ukuhanjiswa okuhle kokushisa, amandla athile, ubulukhuni nokumelana nokugqwala.Lapho okuqukethwe kwe-silicon kuphansi (njenge-0.7), i-ductility ye-aluminium silicon alloy yinhle, evame ukusetshenziswa njenge-deformation alloy; Lapho okuqukethwe kwe-silicon kuphezulu ( okufana ne-7%), impahla yokugcwalisa i-aluminium silicon alloy melt yinhle, evame ukusetshenziswa njenge-casting alloy. Ku-Al Si alloy enokuqukethwe kwe-silicon okudlula iphuzu le-Al Si eutectic (okuqukethwe kwe-silicon kungu-12.6%), lapho okuqukethwe kwezinhlayiyana ku-14.5% ~ 25%, kufaka inani elithile le-Ni, Cu, Mg nezinye izinto ithuthukise izakhiwo zayo eziphelele. Zingasetshenziswa ezinjinini zezimoto esikhundleni samasilinda ensimbi okwehliswayo ukunciphisa kakhulu isisindo.
Ubunzima ekusetshenzisweni kwe-aluminium alloy
1. Ummese wokunamathela kommese - iphuzu lokuncibilika okuphansi, ukusika ukushisa kulula ukudala ukuncibilika kwempahla nommese wokunamathela, ukwakha isimila sokuqongelela i-chip;
2.Ukusika ukusonteka - i-aluminium alloy inobulukhuni obuncane, ukushuba okuphezulu kwepulasitiki nokwenziwa komsebenzi okweqile ngesikhathi sokusika;
3. Ukusika ukudlidliza - i-aluminium alloy ine-modulus encane yokunwebeka futhi kulula ukukhiqiza ukuqina ngesikhathi sokusika.
Izinto ze-aluminium alloy ku-aluminium alloy die castings zihlukaniswe ikakhulu:
I-Aluminium silicon alloy, i-aluminium silicon ingxubevange yethusi kanye ne-aluminium magnesium alloy:
I-Aluminium silicon alloy: kufaka phakathi i-yl102 (ADC1, a413.0, njll.), Yl104 (adc3, a360);
I-Aluminium silicon ingxubevange yethusi: ikakhulu kufaka phakathi i-YL112 (A380, adc10, njll.), Yl113 (3830), yl117 (B390, adc14), ADC12, njll;
I-Aluminium magnesium alloy: ifaka kakhulu i-302 (5180, adc5, adc6, njll.).
I-ADC12 ne-adc6 yizinto ezisetshenziswa kakhulu eChina. Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zinto ezimbili ukuthi okuqukethwe u-Si, Fe, Cu, Zn, Ni no-Sn we-ADC12 kuphakeme kunalokho kwe-adc6, kanti okuqukethwe kweMg kuphansi kunalokho kwe-adc6. I-ADC12 inezinto ezingcono zokubumba nokufaka imishini, futhi ukumelana nokugqwala kwayo kungaphansi kwaleyo ye-adc6.